» नेपाल आईडलमा कसलाई लाग्यो कोरोना ?
नेपाल आईडलमा कसलाई लाग्यो कोरोना ?
१३ भाद्र २०७७, शनिबार १०:०३
मकवानपुर, १३ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता मोरङकी सज्जा चौलागाई भइसकेकी छिन् । त्यस्तै प्रविण बेड्वाल फस्ट रनरअप र किरण कुमार भुजेल सेकेण्ड रनरअप भईसकेका छन् । नेपाल आईडल सिजन ३ पनि कोरोनाबाट अछुतो रहन सकेन । वाईल्ड कार्ड राउण्डपछि नै भएको लकडाउनका कारण समस्या झेलिरहेको शो केही महिनापछि दर्शकबिनै छायाँकन गरि प्रसारण गरिएको थियो । उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै गर्दा पनि अन्तत नेपाल आईडलको टिमबाट कोही एक जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि यसको फाईनल कार्यक्रम निक्कै खल्लो भएको छ ।
शुक्रबार भएको ग्राण्ड फिनालेका लागि सम्भावित खतरालाई मध्य नजर गर्दै विजेता घोषणा बाहेकका सबै कार्यक्रमहरु अग्रिम रुपमा छायाँकन गरिएको थियो । छायाँकन गरिएका भागहरुलाई प्रसारण गरिसकेपछि नेपाल आईडल टिमले विजेता भने लाईभ घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कार्यक्रममा सबै प्रस्तुतिहरु रेकर्ड भएपश्चात निर्माण टोलीकै एक जनालाई कोरोना लागेको पुष्टि भयो र सबै सहभागीहरुसहित निर्माण टोलीका साथमा निर्णायकहरु पनि आईशोलेसनमा जानुपर्ने बाध्यता आईपर्यो । जसका कारण शोको नतिजा पनि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षले घोषणा गर्नुपर्यो । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
नेपाल आईडलका कसलाई कोरोना पुष्टि भयो भन्ने बारेमा दर्शकहरु अनभिज्ञ छन् । उनी एकजना मात्र संक्रमित भए या अरु पनि ? यसबारे तुरुन्तै भन्नसक्ने अवस्था छैन । सम्भवत सबैको स्वाब टेष्टको रिपोर्ट र आईशोलेसनपछिको अन्तिम स्वाब टेष्टको रिपोर्टले यसको निक्र्योल गर्नेछ । जसलाई कोरोना लागेता पनि उनलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ । साथै सबै नेपाल आईडल टिमलाई नै सुरक्षित भएर बस्न हामी आग्रह गर्छौँ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता सज्जा चौलागाई बनेकी छिन् । उनले निर्णायक र दर्शक भोटका आधारमा टाईटल जितेकी हुन् । फाईनलमा पुगेका प्रविण बेड्वाल फस्ट रनर अप र किरण कुमार भुजेल सेकेण्ड रनर अप भएका छन् । जितसँगै सज्जाले नगद ५० लाख, प्रविणले नगद १० लाख र किरणले नगद ५ लाख जितेका छन् ।उनले आफ्नो अन्तिम प्रस्तुतिमा निर्णायकहरुको मन जितेका थिए । नेपाल आईडलको स्टुडियोबाट भएको फाईनल लाईभलाई एक लाखभन्दा बढी दर्शकले युट्युबमा पनि लाईभ हेरेका थिए । यो नेपाल आईडलको ईतिहासमा नै पहिलो पटक महिला विजेता भएको घटना हो । यसअघि नेपाल आईडलको पहिलो सिजन बुद्ध लामाले र दोस्रो सिजन रवि ओडले जितेका थिए ।
प्रतियोगितामा फाईनालिष्ट सहित स्वस्तिका ढकाल, ममता गुरुङ, मुस्कान रानाभाट, रचना रिमाल, मेघा श्रेष्ठ, नेशन पुन मगर र केविन ग्लान तामाङले प्रस्तुति दिएका थिए । तर यी प्रस्तुतिहरुको छायाँकन पश्चात नेपाल आईडल निर्माण टोलीका एक जनालाई कोरोना लागेपछि शोका प्रतियोगी, निर्णायक र सहभागीहरुसमेत आईशोलेसनमा जानुपरेपछि फाईनल खल्लो हुन पुगेको थियो । तथापी फाईनलको रिजल्ट भने अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षले रिजल्ट घोषणा गरेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–